Kompositi Kugadzira Muchina, Kompositi Turner Muchina - Tagrm
Nanning Tagrm Co, Ltd inoshanda mukugadzira uye kugadzira akasiyana manyowa Turner, zvishandiso zvekuvirisa chinovira uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza. Kuburikidza nemakumi matatu emakore ekuenderera mberi nekutsvaga uye kusimudzira, uye nezvakanakira zvekushandisa zvakaderera, zvakakwira kuburitsa & mhedzisiro, zvigadzirwa zve TAGRM zvakahwina zvinopfuura makumi matatu patent yenyika.
ZVIMWE ZVINopfuura 13000 SQUARE METER
ZVIMWE ZVINopfuura 15 ZVINOGONESESA
NYIKA DZINopfuura 60
Wenyika inozivikanwa compost Window Turner ye livesto ...
STORNG DZEMAITIKO TEAM
TAGRM timu yehunyanzvi timu yakanakisa ine makumi emakore ehunyanzvi ruzivo uye nehunyanzvi maitiro. Kuti uwane zvinodikanwa zvemusika, TAGRM inoramba ichitarisa pakuvakwa kwetarenda timu.
TAGRM mavhiri anotenderera anokodzera zvidiki kusvika zvakakura kompositi chiyero. Ivo vane kuita kwakanaka senge yakakwira kushanda kushanda, yakasimba uye yakasimba zvinhu, yakachengeteka & kugadzikana mashandiro, nezvimwe.
TAGRM's mushure-yekutengesa sevhisi pane kompositi Turner inosanganisira yehunyanzvi hwetekiniki kutungamira, kupihwa kwekuchengetedza zvikamu, zvikamu zvenguva nenguva, nezvimwe.
China Yakakura Kupfuura Kompost Turner-M6300 Mhinduro kubva kuMutengi
China Chikuru Chikuru Komposita Turner-M6300 Mhinduro kubva kuCustomer Kushanda Kero: Chipfuwo chemombe kuchamhembe kweChina Main Raw zvinhu: Organic mombe mupfudze, mupfudze wemakwai Gore Negore Kugona kweMombe Mombe: 78,500 matani Maererano neChinese Ministry of Agriculture, China prod ...
Iko Kusvibisa Kwatinowana Kubva Kumarara VS Makomborero Atinowana Nekuomesa Iyo
Zvakanakira Kompositi kuNyika uye Zvekurima Kuchengetedza mvura uye ivhu. Inodzivirira mhando yepasi pemvura. Inodzivirira kugadzirwa kwemethane uye leachate inogadzirwa mumabhadharo evhu. Inodzivirira kukora uye kurasikirwa kweturu mumigwagwa, mhoro ...